बिहिबारको दिन यी कार्य नगर्नुहोस, नत्र पछुताउनु पर्ला ! – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Intresting/बिहिबारको दिन यी कार्य नगर्नुहोस, नत्र पछुताउनु पर्ला !
कुनै नयाँ कार्य गर्दा हामिले एकपटक सोचबिचार गरेरै गर्नु राम्रो हुन्छ ।
जे कार्य पनि हतारमा गर्दा कार्य सफल नहुन सक्छ । त्यसैले कुन बार कस्तो कार्य गर्दा सफल भइन्छ भन्ने कुरा हामिलाई थाहाँ हुनु जरुरी छ । बेलैमा कस्तो कार्य गर्दा सफल भइन्छ भन्ने कुरा जानकारी भएमा आइपर्ने समस्याबाट सजिलै छुटकारा पाउँन सकिन्छ ।
मनछुने कथा असल श्रीमती महिलाले एकचोटी अबस्य पढौं अनि पुरुषले शेयर गरौँ
घरमै पूजा आराधना गरी मनाइयो श्रीकृष्णजन्माष्टमी